Orinasa hafa, mpamatsy - China hafa mpanamboatra
Horonantsary hanehoana milina famenoana gilasy ao amin'ny orinasa mpamokatra gilasy. Product Description: Herbin gilasy fonosana milina dia ahitana fizarana telo: sakafo, milanja, fonosana. Tokan-tena famatsiana dynamo, visy mampita ranomandry. Izahay dia manolo-tena hanome anao milina famonosana gilasy tsotra, azo itokisana, ara-toekarena. Endri-javatra: rafitra tsotra, lanja maivana, fitaterana mora. Ny interface rehetra dia rakotra vy vy 304, mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana ara-tsakafo. Fanamboarana rafitra...
Famaritana ny vokatra: Ho an'ireo mpampiasa milina gilasy ara-barotra madinika sy mpanjifa izay afaka mampiasa ranomandry amin'ny fahita mahazatra amin'ny antoandro, dia tsy mila mitondra ny rafitra fampangatsiahana ho an'ny efitrano fitehirizana gilasy izy ireo. Ho an'ny efitrano fitehirizana ranomandry lehibe, ny vata fampangatsiahana dia ilaina mba hijanonana amin'ny mari-pana ao anatiny minus mba hahafahan'ny ranomandry ao anatiny tsy mitsonika ela. Ny efitrano gilasy dia ampiasaina amin'ny fitehirizana gilasy flake, gilasy sakana, fantsona gilasy ary ny sisa. Endri-javatra: 1. vata fitehirizana mangatsiaka ny hatevin'ny insulation ...
Famaritana ny vokatra: Herbin dia manome fitaovana fanorotoroana gilasy ho an'ny fanosihosena ny vatolampy gilasy, fantsona gilasy, sy ny sisa. Ny ranomandry dia azo potipotika kely na vovoka mihitsy aza. Ny ranomandry nopotehina dia afaka mifanaraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana ara-tsakafo raha mitaky izany ny mpanjifa. Endri-javatra: Ny akorany dia vita amin'ny lovia vy sy Stainless vy, mba hahazoana antoka tsara tarehy sy tsara tarehy. Ny famolavolana modular dia mahatonga azy io ho mora sy azo antoka. Fahombiazana avo sy fiainana maharitra. Vita amin'ny vy tsy misy pentina 304. Ny fizotran'ny gilasy ...
Ny fitaovana amin'ny kitapo gilasy dia mifanaraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana ara-tsakafo, izay miantoka ny kalitaon'ny gilasy. Kitapo ranomandry misy habe samihafa dia misy, izay azo amboarina araka ny santionan'ny mpanjifa. Ny fampahalalana ara-barotra misy logos samihafa dia azo atao pirinty amin'ny kitapo. Ny kitapo mangarahara tsy misy fanontana no mora indrindra.